Ọpụpụ 29 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
29 “Nke a bụ ihe ị ga-emere ha iji doo ha nsọ ka ha wee bụrụ ndị nchụàjà m: Kpụrụ nwa oké ehi, nakwa ebule abụọ,+ ndị ahụ́ dị mma,+ 2 na achịcha na-ekoghị eko nakwa achịcha ụtọ na-ekoghị eko nke a gwara mmanụ nakwa achịcha na-ekoghị eko dị fere fere nke e tere mmanụ.+ Ị ga-eji ntụ ọka wit e gwere nke ọma mee ha. 3 Ị ga-achịnye ha n’ime nkata ma were nkata ahụ bute ha,+ kpụtakwa oké ehi ahụ na ebule abụọ ahụ. 4 “Ị ga-akpọta Erọn na ụmụ ya ndị ikom n’ọnụ ụzọ+ ụlọikwuu nzute, ị ga-ewerekwa mmiri saa ha ahụ́.+ 5 Ị ga-achịrị uwe+ ndị ahụ yiwe Erọn uwe mwụda ahụ na uwe na-enweghị aka nke efọd ahụ na efọd ya na akpa obi ahụ, ị ga-ejikwa eriri efọd ahụ kesie ya ike n’úkwù.+ 6 Ị ga-eke ya ákwà ahụ a na-eke n’isi n’isi ma tinye ihe àmà nraranye ahụ dị nsọ n’ákwà ahụ a na-eke n’isi.+ 7 Ị ga-ewere mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ+ wụsa ya n’isi wee tee ya mmanụ.+ 8 “Ị ga-akpọta ụmụ ya ndị ikom wee yiwe ha uwe mwụda ahụ.+ 9 Ị ga-eke Erọn na ụmụ ya ndị ikom ákwà ike n’úkwù, ị ga-afụkwa ha ákwà ahụ a na-afụ n’isi; ọrụ nchụàjà ga-abụkwa nke ha dị ka ụkpụrụ na-adịru mgbe a na-akaghị aka.+ Ị ga-enye Erọn ikike, nyekwa ụmụ ya ndị ikom.+ 10 “Ị ga-akpụta oké ehi ahụ n’ihu ụlọikwuu nzute, Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị aka ha n’isi oké ehi ahụ.+ 11 Ị ga-egbukwa oké ehi ahụ n’ihu Jehova, n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.+ 12 Ị ga-eweretụ ọbara oké ehi+ ahụ ma jiri mkpịsị aka tee ya na mpi ebe ịchụàjà ahụ,+ ọbara dum fọdụrụ ka ị ga-awụsa n’ala ebe ịchụàjà ahụ.+ 13 Ị ga-ewerekwa abụba+ niile kpuchiri eriri afọ ya,+ na abụba kpuchiri imeju ya,+ na akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha, ị ga-esure ha n’ọkụ n’ebe ịchụàjà ahụ.+ 14 Ma ị ga-akpọ anụ oké ehi ahụ na akpụkpọ ya na nsị ya ọkụ ná mpụga ebe a mara ụlọikwuu.+ Ọ bụ àjà mmehie. 15 “Ị ga-akpụrụkwa otu n’ime ebule ahụ,+ Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị aka ha n’isi ebule ahụ.+ 16 Ị ga-egbu ebule ahụ ma were ọbara ya fesa gburugburu ebe ịchụàjà ahụ.+ 17 Ị ga-abọrisị ebule ahụ, ị ga-asakwa eriri afọ+ ya na ụkwụ ya mmiri ma tụkwasị akụkụ ya nke ọ bụla n’ebe ibe ya dị ruo n’isi ya. 18 Ị ga-esure ebule ahụ dum n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà. Ọ bụ àjà nsure ọkụ+ nke na-esi ísì ụtọ+ a chụụrụ Jehova. Ọ bụ àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ. 19 “E mesịa, ị ga-akpụrụ ebule nke ọzọ, Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị aka ha n’isi ebule ahụ.+ 20 Ị ga-egbu ebule ahụ ma weretụ ọbara ya tee n’ọnụ ọnụ ntị aka nri Erọn nakwa n’ọnụ ọnụ ntị aka nri ụmụ ya ndị ikom nakwa na mkpịsị aka ukwu nke aka nri+ ha na mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ha, ị ga-efesakwa ọbara ahụ gburugburu ebe ịchụàjà ahụ. 21 Ị ga-eweretụ ọbara ahụ dị n’ebe ịchụàjà ahụ, weretụ mmanụ ahụ e ji ete mmadụ mmanụ,+ fesa n’ahụ́ Erọn nakwa n’uwe ya nakwa n’ahụ́ ụmụ ya ndị ikom nakwa n’uwe ụmụ ya ndị ikom ya na ha nọ, ka ya na uwe ya na ụmụ ya ndị ikom na uwe ụmụ ya ndị ikom wee dị nsọ n’ezie.+ 22 “Ị ga-ewerekwa abụba ebule ahụ na ọdụ ya nke bụ́ abụba abụba+ na abụba nke kpuchiri eriri afọ ya, na abụba kpuchiri imeju ya, na akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha, na ụkwụ aka nri ya,+ n’ihi na ọ bụ ebule e ji ahọpụta mmadụ;+ 23 werekwa otu ogbe achịcha na otu achịcha ụtọ nke a gwara mmanụ na otu achịcha dị fere fere nke si na nkata achịcha ahụ na-ekoghị eko dị n’ihu Jehova.+ 24 Ị ga-achịkwasị ha niile n’ọbụ aka Erọn nakwa n’ọbụ aka ụmụ ya ndị ikom,+ ị ga-efegharị ha ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova.+ 25 Ị ga-achịrị ha n’aka ha wee suree ha n’ọkụ n’ebe ịchụàjà ahụ n’elu àjà nsure ọkụ ahụ ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ n’ihu Jehova.+ Ọ bụ àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ.+ 26 Ị ga-ewere obi ebule ahụ e ji ahọpụta mmadụ,+ nke bụ́ maka Erọn, ma fegharịa ya ka ọ bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova, ọ ga-abụkwa òkè gị. 27 Ị ga-edokwa obi anụ+ àjà ahụ a na-efegharị efegharị nsọ nakwa ụkwụ anụ nke òkè ahụ dị nsọ bụ́ nke e fegharịrị nakwa nke e nyere n’onyinye site n’ebule ahụ e ji ahọpụta mmadụ,+ site n’ihe bụ́ maka Erọn na ihe bụ́ maka ụmụ ya ndị ikom. 28 Ha ga-abụ nke Erọn na nke ụmụ ya dị ka ụkpụrụ ga-adịru mgbe a na-akaghị aka nke ụmụ Izrel ga na-edebe, n’ihi na ọ bụ òkè dị nsọ;+ ọ ga-abụkwa òkè dị nsọ nke ụmụ Izrel ga na-enye. Ọ bụ òkè ha dị nsọ nke dịịrị Jehova site n’àjà udo ha.+ 29 “Uwe nsọ+ Erọn ga-adịrị ụmụ+ ya ga-anọchi ya maka iji ha tee ha mmanụ+ na iji nye ha ikike.+ 30 Ụbọchị asaa+ ka onye nchụàjà ahụ ga-eyi ha, bụ́ onye ga-anọchi ya site n’ụmụ ya ndị ikom, bụkwa onye na-abata n’ụlọikwuu nzute iji jee ozi n’ebe nsọ ahụ. 31 “Ị ga-akpụrụ ebule ahụ e ji ahọpụta mmadụ, ị ga-esikwa anụ ya n’ebe dị nsọ.+ 32 Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-eri+ anụ ebule ahụ na achịcha ahụ dị n’ime nkata ahụ n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute. 33 Ha ga-eri ihe ndị ahụ e ji kpuchie mmehie iji nye ha ikike, ka e wee doo ha nsọ.+ Ma onye nkịtị agaghị eri ha, n’ihi na ha bụ ihe dị nsọ.+ 34 Ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime anụ àjà ahụ e ji ahọpụta mmadụ nakwa nke ọ bụla n’ime achịcha ahụ afọdụ ruo ụtụtụ, ị ga-akpọ ya ọkụ.+ A gaghị eri ya eri, n’ihi na ọ bụ ihe dị nsọ. 35 “Otú a ka ị ga-eme Erọn na ụmụ ya ndị ikom dị ka ihe niile m nyere gị n’iwu si dị.+ Ị ga-eji ụbọchị asaa nye ha ikike.+ 36 Ị ga na-achụ oké ehi bụ́ maka àjà mmehie kwa ụbọchị maka ikpuchi mmehie,+ ị ga-asachapụ ebe ịchụàjà ahụ mmehie site n’ịchụ àjà mkpuchi mmehie maka ya, ị ga-etekwa ya mmanụ+ iji doo ya nsọ. 37 Ị ga-eji ụbọchị asaa chụọ àjà mkpuchi mmehie maka ebe ịchụàjà ahụ, ị ga-edokwa ya nsọ+ ka o wee bụrụ n’ezie ebe ịchụàjà kasị nsọ.+ Onye ọ bụla nke ga-emetụ ebe ịchụàjà ahụ aka ga-abụ onye dị nsọ.+ 38 “Nke a bụ ihe ị ga-achụ n’àjà n’ebe ịchụàjà ahụ: ụmụ ebule ndị gbara otu afọ otu afọ, abụọ kwa ụbọchị, mgbe niile.+ 39 Ị ga-achụ otu nwa ebule n’àjà n’ụtụtụ,+ ị ga-achụkwa nwa ebule nke ọzọ n’àjà ná mgbede.+ 40 Ị ga-eji otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa ntụ ọka* e gwere nke ọma+ nke a gwara otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ hin mmanụ a sụpụtara ná mkpụrụ oliv, na àjà ihe ọṅụṅụ+ nke bụ́ otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ hin mmanya wee chụọ nwa ebule nke mbụ ahụ n’àjà. 41 Ị ga-achụkwa nwa ebule nke abụọ ahụ n’àjà ná mgbede. Ị ga-achụ ya n’àjà, ya na àjà ọka+ nke dị ka nke a na-achụ n’ụtụtụ nakwa àjà ihe ọṅụṅụ nke dị ka àjà ihe ọṅụṅụ ya, ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ, àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ. 42 Ọ bụ àjà nsure ọkụ a ga na-achụ mgbe niile+ n’ọgbọ unu niile n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute n’ihu Jehova, bụ́ ebe m ga-apụta ìhè n’ihu unu ịgwa gị okwu.+ 43 “M ga-apụta ìhè n’ebe ahụ n’ihu ụmụ Izrel, ebube m ga-emekwa ka ọ dị nsọ.+ 44 M ga-edo ụlọikwuu nzute na ebe ịchụàjà ahụ nsọ; m ga-edokwa Erọn na ụmụ ya ndị ikom nsọ+ ka ha wee bụrụ ndị nchụàjà m. 45 M ga-ebi n’etiti ụmụ Izrel, m ga-abụkwa Chineke ha.+ 46 Ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova bụ́ Chineke ha, onye kpọpụtara ha n’ala Ijipt ka m wee biri n’etiti ha.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke ha.+